ဟင် ... ဘာလို့ သမီးကို နှိုးပါလိမ့်ပေါ့။ စဉ်းစားနေတုံး ရှိသေး။ မဂျူဂျူ ဆက်ရှင်းပြမှ ငိုအားထက် ရယ်အားသန် ဖြစ်ရပါတော့သည်။ " ဖေဖေက တံခါးကို ခေါက်တယ်။ မေမေ့ကို အကျယ်ကြီးခေါ်တယ်။ အဲ့မှာ ဂျူဂျူလဲ လန့်နိုးသွားတယ်။ ပြီးတော့ ဂျူဂျူတို့အခန်းက ပြတင်းပေါက်ကိုလဲ ခေါက်တယ်။ ဂျူဂျူ့ကိုနှိုးတယ်။ at the same time ဂျူဂျူ့ ဘေးက တယ်လီဖုန်းကြီးကလဲ ထမြည်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ဂျူဂျူလဲ ထပြီး ဖေဖေ့ကို တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ ..."
AnonymousMarch 21, 2012 at 11:57 AMlovely Ju Ju..ReplyDeleteAnonymousMarch 21, 2012 at 12:12 PMနမော်နမဲ့နဲ့နမူးနထိုင်းဆီက ဂျူဂျူလေး နမော်နထိုင်းဒါမှမဟုတ် နမူးနမဲ့များဖြစ်နေမလား :PReplyDeleteAnonymousMarch 21, 2012 at 12:45 PMဲJu Ju လေးက တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်.... မေးကြည့်ပေးပါဦး အခုရော -ီး အနေတော်လေးပဲလား လို့လေ ..... :))))NTZReplyDeleteAnonymousMarch 21, 2012 at 1:18 PMJu Ju is so sweet. I love her so much. Pls give my love to her.IoraReplyDeleteဖိုးတုတ်March 21, 2012 at 1:33 PMရယ်လိုက်ရတာ၊ မဆွိရေးသမျှထဲမှာ ဒီပို.စ်က အကောင်းဆုံးပို.စ်ReplyDeleterose of sharonMarch 21, 2012 at 3:04 PMဂျူဂျူလေးအစောကြီးထလိုက်ရတယ်...သနားပါတယ် ... :))ReplyDeleteAnonymousMarch 21, 2012 at 4:25 PMlaughable post until my stomach pain..... :DI love all your family.Kyi Sandar..ReplyDeleteAnonymousMarch 21, 2012 at 4:35 PM:D :DReplyDeleteမောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ)March 21, 2012 at 6:39 PMး)း)လွဲချက်တွေReplyDeletesusuMarch 21, 2012 at 8:00 PMဖတ်ပြီး‌အော်ရီသွားတယ်တီဆွိ‌ရေ...ဒါနဲ့သူများကို‌စောင်းေ ပြာတာ‌တော့မဟုတ်‌လောက်ပါဘူး‌နော်..အကျီ်ေ ပြာင်းပြန်ခဏခဏဝတ်မိလို့အရှက်ကွဲ‌ပေါင်းများ‌နေလို့ပါ..။းPReplyDeleteAnonymousMarch 22, 2012 at 4:35 AMShu mawa thameelay Juu Juu so cute.GyidawReplyDeleteAnonymousMarch 22, 2012 at 5:00 AMမမဆွိဖတ်ပြီး ရီလိုက်ရတာ၊ ရေးတတ်တဲ့ မဆွိပဲ၊မြရီReplyDeleteAnonymousMarch 23, 2012 at 9:47 PMအော်ရီသွားတယ်.. ဂျူဂျူလေး ချစ်စရာလေးReplyDeletesan htunApril 8, 2012 at 11:53 AMဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်ရတာ တီဆွိရေ..ဂျူးဂျူးလေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်..ReplyDeleteAdd commentLoad more...